Maxay ahayeen Soomaalida ku dhibaateysan xuduudda Belarus iyo Poland? - Diblomaasi
Dalalka Jarmalka iyo Ruushka ayaa dib u soo celiyay duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyay
Shirkadaha diyaaradaha ayaa sheegaya in duulimaadyadii u kala gooshi jiray Ruushka iyo Jarmalka ay dib u bilowdeen. Ogeysiiska ayaa yimid ka dib markii Jarmalku sheegay inuu mamnuucay shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka soo gala ka dib markii Moscow ay ku guuldareysatay inay kordhiso rukhsadaha duulimaadka Lufthansa.
Duulimaadyada u dhexeeya Jarmalka iyo Ruushka ayaa dib u bilaabmay ka dib markii uu hakad galay dhowr saacadood, shirkadaha diyaaradaha ayaa sheegay, ka dib markii waddan kasta uu xanibay duulimaadyada kale ee imaan lahaa.
“Masuuliyiinta Ruushka waxay ogolaansho u siisay Lufthansa inay duulimaadyo ku tagto Ruushka bishii Juun. Tani waxay ka dhigan tahay in duulimaadyada Lufthansa ee Moscow iyo Saint Petersburg ay u shaqeyn karaan sidii loogu talo galay, ”afhayeen u hadashay shirkadda ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP fiidnimadii Arbacada.
Dalalka Germany iyo Ruushka ayaa dib u soo celiyay duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyay, kaddib markii galinkii hore ee shalay labada waddanba joojiyeen socdaalka diyaaradaha tooska ah, muran dhinaca diblomaasiyadda ah aawadi.
Wasaarada Gaaddiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay in tallaabada ay ku joojisay diyaaradaha Ruushka ay qaadday kaddib markii Ruushka ay diiday shirkadda diyaaradaha Lufthansa in ay soo gacadhigato garoomadooda.
Murankan ayaa soo kala dhex galay dalalka Midowga Yurub iyo Ruushka kaddib markii ay diyaarada Ryan Airlines oo kasoo kicitintay dalka Giriiga, kuna socotay waddanka Lithuania ay dowlada Belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi u dhashay dalkeeda oo ay baadi goobayeen in muddo ah.
Diyaaradaha Ruushka ee Aeroflot iyo S7 ayaa sidoo kale shaaciyay duulimaadyadooda inay dib u bilaabi doonaan Jarmalka, sida ay sheegeen wakaaladaha Ruushka ee TASS iyo Ria Novosti.
Goor sii horreysay Arbacadii, Wasaaradda Gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay inay u diidday shirkadaha diyaaradaha ee Ruushka rukhsad ay ku isticmaali karaan hawadooda kadib markii Moscow ay ku guuldareysatay inay oggolaato duulimaadkii Lufthansa ee Ruushka. Waxay sheegtay in go’aanka uu ku salaysnaa dhaqanka oggolaanshaha isweydaarsiga duulimaadyada.
Muranka ayaa daba socda dhaq dhaqaaqii Midowga Yurub ee ahaa in la joojiyo duulimaadyadii ku xirnaa Ruushka ee ka gudbaya hawada Belarus kadib markii xukuumada Minsk ay adeegsatay hanjabaad bambo been abuur ah oo ay ku qasbeyso duulimaad ka dhex socda Ryanair si ay u degto ka dibna loo xiro Roman Protasevich, oo ah dhaqdhaqaaqe iyo wariye ayaa saarnaa.
Intaas ka dib, Moscow waxay diiday inay oggolaato qorshooyinka duulimaad ee la cusbooneysiiyay ee dhowr duulimaadyo Yurub ah oo loogu talagalay inay u oggolaadaan in diyaaraddoodu ay gaarto Ruushka iyada oo aan laga tallaabin xulufada dhow ee Belarus.
Wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay goor sii horreysay Arbacadii hay’adda duulista Ruushka ee FATA in aysan cusbooneysiinin xuquuqda duulimaadka ee Lufthansa bisha Juun waqtigeeda, taasoo la macno ah in duulimaadkii lagu waday inuu baxo horaanta Juun 2-deeda ee la joojiyo.
Iyadoo lagu saleynayo dhaqanka caadiga ah ee isdhaafsiga, Xafiiska Duulista Hawada ee Federalka ma uusan siinin wax ogolaansho dheeraad ah duulimaadyada diyaaradaha Ruushka mana sameyn doono inta ogolaanshaha Ruushka uu wali taagan yahay, ”ayay tiri wasaradu, iyadoo intaa ku dartay in safaarada Jarmalka ee Moscow ay ku jirtay isdhaafsiga dhow ee saraakiisha duulista Ruushka.
Dhaqdhaqaaqyadan ayaa yimid iyada oo ay jirto xiisad sii kordheysa oo u dhaxeysa dalalka reer galbeedka iyo Ruushka oo ku saabsan taageerada dambe ee Belarus.
27-ka dal ee xubnaha ka ah iyo Mareykanka ayaa usbuucii la soo dhaafay soo saaray cunaqabateyn hor leh oo ka dhan ah Belarus kadib dhacdadii Ryanair, marka lagu daro kuwii horey loogu soo rogay mas’uuliyiinta Belarusia, oo uu ku jiro madaxweynahoodii mudada dheer Alexander Lukashenko oo lagu eedeeyay musuqmaasuq doorashada iyo hoos u dhigista mudaaharaadka sanadkii hore.
Muxuu Mareykanku kaga digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii uu dhinto mucaaradka madaxweyne Putin, Alexei Navalny?
Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in amaanka Alexey Navalny ay mas’uul ka tahay dowlada Ruushka. Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu ‘aad uga walaacsan yahay’ wararka ku saabsan caafimaadka Navalny waxayna ku baaqeen ‘si deg deg ah oo shuruud la’aan ah loo sii daayo’.
La Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Joe Biden Jake Sullivan ayaa sheegay in dowlada Mareykanka ay u sheegtay Ruushka “cawaaqib ayaa ka dhalan doona” hadii Kremlin-ka uu dhaleeceeyay Alexey Navalny uu ku dhinto xabsiga.
“Waxaan la socodsiinay dowladda Ruushka in waxa ku dhacaya Mr Navalny oo ay gacanta ku hayaan ay tahay mas’uuliyadooda isla markaana ay la xisaabtami doonaan bulshada caalamka,” ayuu Sullivan u sheegay CNN Axaddii.
“Marka la eego tallaabooyinka gaarka ah ee aan qaadi doonno, waxaan eegeynaa noocyo kala duwan oo kharashyo kala duwan ah oo aan ku soo rogi doonno mana doonayo inaan telefon u diro si rasmi ah xilligan, laakiin waxaan la socodsiinay inay jiri doonaan cawaaqibyo haddii Mr Navalny uu dhinto, ”ayuu raaciyay.
Dhaqtarka Navalny, oo kujira usbuuca seddexaad ee cuntada joojinta, ayaa sheegay in caafimaadkiisa uu si xowli ah usii xumaanayo 44 jirkaanna qarka u saaran yahay inuu dhinto.
Mucaaradka caanka ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu bilaabay inuu diido cuntada 31 Maarso si uu uga mudaaharaado maqnaanshaha daaweyn ku habboon oo lugta iyo dhabarka ah.
“Hanjabaadan ugu dambeysay ee ka imaaneysa Mareykanka waxay kor u qaadeysaa dhibaatooyinka kale ee diblomaasiyadeed ee ku dhacay labada dal,” ayuu yiri Mike Hanna oo ka tirsan Al Jazeera oo ka soo warramaya Washington, DC, isagoo soo xiganaya cunaqabateyntii ugu dambeysay ee Mareykanku saaray Ruushka.
‘Ma sugi karo intaa ka badan’
Kooxda Navalny ayaa ku baaqday mudaaharaadyo Ruushka fiidnimadii Arbacada, saacado uun ka dib markii Putin lagu wado inuu jeediyo khudbad qaran. Volkov wuxuu sheegay in isu soo baxa Arbacada uu noqon karo dagaal qaraar oo looga soo horjeedo “shar shar ah” ama isu soo baxii ugu dambeeyay ee Ruushka ee sanadaha soo socda.
“Hadda waxaa lagu dilayaa xabsi, mana sugi kartid wax intaas ka badan.”
“U wac dhammaan dadka aad taqaanno una kaxee fagaarayaasha dhexe,” ayuu qoray Volkov, oo madax ka ah xafiisyada gobolka ee Navalny, isagoo intaas ku daray in dibadbaxyadu ay noqdaan kuwo ballaaran.
Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay booliska iyo saraakiisha dawladda oo ku saabsan baaqa mudaharaadka.
Booliska Ruushka ayaa xiray kumanaan dad ah bishii Janaayo markii dibad baxayaasha ay isugu soo baxeen wadooyinka dalka oo dhan iyagoo dalbanayay sii deynta Navalny. Booliska waxay xireen in kabadan 10,000 oo qof intii lagu gudajiray mudaaharaadyadii wadanka looga taageerayay Navalny bishii Janaayo sumeyn uu ku eedeeyay Kremlin-ka.
Saraakiisha Ruushka way beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen waxayna xitaa su’aal ka keeneen in Navalny la sumeeyey iyo inkale, taas oo ay xaqiijiyeen dhowr shaybaarro Yurub ah. Navalny waxaa lagu xukumay in uu xabsi ku qaato laba sano iyo badh sababo la xidhiidha in soo kabsashadiisii ​​dheerayd ee uu ku joogay Jarmalka ay jabisay xukunkii ganaaxa ahaa ee lagu xukumay ee ahaa khiyaanada musuqmaasuq kiiskii Navalny uu ku sheegay inuu ahaa mid siyaasadaysan.
Baaq uu soo saaray Wakiilka Sare oo ka wakiil ah Midowga Yurub kuna saabsan xaaladda caafimaad ee sii xumaaneysa ee Alexei Navalny
Midowga Yurub wuxuu si qoto dheer uga walaacsan yahay wararka sheegaya in siyaasiga mucaaradka ah ee reer Ruushiya Alexei Navalny caafimaadkiisa. Waxaan ka codsaneynaa masuuliyiinta Ruushka inay si deg deg ah ugu ogolaadaan xirfadlayaal caafimaad oo uu ku kalsoon yahay. Mas’uuliyiinta Ruushka ayaa mas’uul ka ah nabadgelyada iyo caafimaadka Mr Navalny gumeysiga ciqaabta, taas oo aan kula xisaabtameyno.
Midowga Yurub waxay cambaareeyeen sumaynta Mr Navalny sida ugu adag uguna macquulsan waxayna cunaqabateyn ku soo rogeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore lix sarkaal sare oo Ruush ah iyo hal hay’ad oo ku lug lahayd isku dayga dilka. Intaas waxaa sii dheer, iyada oo hoos timaadda xukunkeeda cunaqabateynta xuquuqda aadanaha ee adduunka, Midowga Yurub wuxuu cunaqabateyn saaray afar qof bishii Febraayo sababo la xiriira doorkooda sharci darrada, dacwad ku oogida iyo xukunka Mr Navalny.
Dacwada Navalny maahan dhacdo go’doon ah laakiin waxay xaqiijineysaa qaab taban oo ah boos yareyn kara mucaaradka, bulshada rayidka ah iyo codadka madaxa banaan ee Federaalka Ruushka.
Midowga Yurub, oo ay weheliyaan la-hawlgalayaasheeda, waxay sii wadi doonaan inay ugu baaqaan Ruushka inuu si deg deg ah u baaro isku dayga dilka iyada oo loo marayo sumeyn Mr Navalny daahfurnaan buuxda iyo dib u dhac dambe, iyo inay si buuxda ula shaqeeyaan Ururka Mamnuuca Hubka Kiimikada (OPCW) si loo hubiyo baaritaan caalami ah oo aan eex lahayn.
Midowga Yurub wuxuu dib ugu laaban doonaa arintan inta lagu gudajiro kulanka soo socda ee Wasiirada Arimaha Dibada ee Midowga Yurub Isniinta, 19-ka Abriil.
Maxaa hoggaamiyaha midigta xagjirka ah looga filayaa inuu ka guuleysto Emmanuel Macron?
Wargayska Isbaanishka ah ee La Vanguardia ayaa sheegay in qasriga Faransiiska ee Elysee uu leeyahay sababo badan oo sababi kara qanacsanaan la’aanta hogaamiyaha midigta fog ee Paris, Marine Le Pen.
Faransiiska-midig wuxuu boos weyn ka dhex helay qeyb ka mid ah codbixiyeyaasha, gaar ahaan dadka da’doodu u dhexeyso 25 iyo 34 sano. Qeybtaan ka tirsan Golaha Shacbiga (oo horey u ahaa National Front) waxay u aragtaa inay tahay ikhtiyaarka ugu horeeya ee wax lagu codeeyo, halka Emmanuel Macron uu lumiyey taageeradiisii ​​doorashada.
Sida laga soo xigtay ra’yi ururin badan oo ay daabacday joornaalka Le Monde, ka dib markii loo codeeyay qalooyinka midigta ah waliba si xad dhaafka ah, qaadacaadani waxay sii kordheysaa hoos u dhac aad u badan, gaar ahaan jiilasha soo koraya ee xusuustooda taariikheed ay wali gaaban tahay
Fikradaha falsafadeed ama colaadeed ee koox ama koox kale oo uu hore u sheegay Jean-Marie Le Pen, oo ah aabaha hogaamiyaha haatan ee xisbiga midigta-fog, waa waxyaabo soo jireen ah. Wargeysku wuxuu xusay inay jiraan sababo kale oo waaweyn iyagu xakameeya markay u socdaan doorashooyinka. Xaqiiqdii, inbadan ayaa ka niyad jabsan Macron waxa ay u arkaan inay tahay siyaasad dhaqaale oo xad dhaaf ah.
Dhallinyaradu sidoo kale waxay noqdeen kuwa ka baqa kana walwalaa mustaqbalkooda, shaqo la’aanta, iyo dhibaatada helitaanka guri. Dhibaatada Corona waxay saameyn buuxda ku yeelatay iyaga, heer xirfad iyo shaqsiyeed. Dhallinyarada Faransiiska waxay dareemayaan in heerkooda nololeed uu sii xumaan doono marka loo eego heerka nololeed ee ay gaareen jiilkii hore.
Wargeysku wuxuu soo wariyay in 29 boqolkiiba cod-bixiyeyaasha da’doodu tahay 25 ilaa 34 ay taageereen habka Macron ee cod-bixinta 2017.
Dhinaca kale, ujeedka loo codeynayo “Le Pen” wuxay koradhay 23 ilaa 29 boqolkiiba, taas oo macnaheedu yahay dib-u-noqoshada isbeddelka, iyada oo loo xaglinayo xuquuqda ba’an, oo laga yaabo inay go’aan ka gaarto doorashooyinka madaxweynenimada guga 2022.
Dhinaca kale, mid ka mid ah kuwa ugu yar – oo da’dooda u dhaxeyso 18 iyo 24 – Macron wuxuu heli doonaa 29 boqolkiiba codadka – ilaa sagaal dhibcood marka la barbar dhigo 2017 – halka taageerada Le Pen ay deggan tahay illaa 20 boqolkiiba.
Si kastaba ha noqotee, codbixintu waxay ka digeysaa in ka-caabbinta dadka da’da yar ay ka badan tahay ka-maqnaanshaha dhallinyarada da’doodu tahay 30 sano.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira taageerayaal badan oo ka mid ah xuquuqda aadka u daran ee dhalinyarada aan haysan shahaado jaamacadeed marka loo eego kuwa haysta dibloomada sare, in kasta oo faraqa uu sii yaraanayo.
Macron oo gadaal ka riixaya
Wargeysku wuxuu intaa ku daray in fasalka ugu wanaagsan ee bulshada loogu talagalay xaquuqda xagjirka ah, taas oo ku taageerta qiyaastii 34 boqolkiiba ujeedka ah in la codeeyo, waa dadka da’doodu u dhaxayso 50 iyo 64 sano.
Taasi waa, jiilka ka baqaya inay ka sii daraan xaaladaha hawlgabnimadooda iyo culeyska la saaray, xaalado badan, iyagoo daryeelaya waalidkood korsanaya.
Wargeyska ayaa sheegay in qayb kale oo ka mid ah xogta ay muujisay ra’yi uruurinta ay tahay in inta badan codbixiyaasha Le Pen aysan aheyn “mudaaharaadayaal ka dhan ah xisbiyada kale”, laakiin ay wadaagaan fikradaha aasaasiga ah iyo falsafada xisbiga midigta-fog.
Guud ahaan markay hadlayaan, waa koox si adag u dhaleeceeya cawaaqibka ka dhalan kara caalamiyeynta, waxay dareemayaan in aan la ilaalin karin waxayna aaminsan yihiin in socdaalka iyo dhaqamada badan ay khatar ku yihiin.
Wargeysku wuxuu sheegay in xisbiga Le Pen uu in sharad ku galay codbixiyaha da’da yar. Doorashooyinkii Yurub 2019, xisbigu wuxuu layaab ku noqotay in Jordan Bardella, oo markaas 23 jir ah, uu liiska ugu sarreeya ka dhigo.
Maanta, isagu mar hore ayuu madaxweyne ku xigeen ka yahay xisbigan siyaasadeed. Si kastaba xaalku ha ahaadee, sharaddii Bardella waxay noqotay mid guuleysata.
Maxay tahay sababta loo kashifay xadgudubyada socdaalka ee Liibiya?
“Dacwad oogayaasha gobolka Ragusa ee dalka Talyaaniga waxay baarayaan shaqaalihii markabka Marie Junio” The Guardian ayaa xaqiijisay in mas’uuliyiinta Talyaanigu ay baarayaan eedeymaha ku saabsan dhageysiga taleefannada ee lala xiriirinayo warbixinnada socdaalka.
Wargeysku wuxuu tilmaamay in wasiirka cadaalada ee Talyaaniga Marta Cartabia ay kormeerayaal u diri doonto Sicily kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dacwad oogayaashu ay dhageysteen boqolaal wadahadalo taleefan ah ugu yaraan 15 saxafi oo kahadlayay arimaha socdaalka ee bartamaha Mediterranean.
Marta Cartabia waa aqoon yahan Talyaani ah, kana soo shaqeysay Wasiirka Cadaalada Xukuumada Ra’iisul Wasaare Mario Draghi ilaa 2021. Marta Cartabia waxay horey u ahayd Garsooraha Maxkamada Dastuuriga ah ee Talyaaniga intii u dhaxeysay 2011 iyo 2020, Madaxweyne kuxigeenka 12kii Nofeembar 2014 ilaa 11 Diisambar 2019. Waa borofisar ku takhasustay sharciga dastuurka. Waa haweeneydii ugu horreysay ee qabata xafiiska Madaxweynaha Maxkamadda Dastuuriga ah.
Bishii Abriil 2, 2021, wargeyska Talyaani ee Doumani wuxuu shaaca ka qaaday in garsoorayaasha gobolka Trapani ay baarayaan NGO-yada iyo ururada samafalka ee badbaadada badaha iyagoo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin tahriibinta dadka. Waxay dhegaysteen telefonada wariyeyaasha iyo wicitaanada samatabbixiyeyaasha waxayna sheegeen inay soo bandhigeen ilaha wariyaasha.
Baaritaanka iyo dhageysiga wacitaanada
Saxafiga madaxa banaan ee Nancy Burcia ayaa ka mid aheyd suxufiyiintaas oo ku andacooday in dacwad oogayaasha ay duubteen wada sheekeysi ay ka sameeyeen Trapani intii lagu jiray xagaagii 2017, iyagoo uruuriyay faahfaahinta shaqsiyadeed iyo magacyada ilaha ay ka soo jeedaan, halka ay baarayaan kiiska ka ganacsiga dadka dhinaca kale ee badda Mediterranean
Baarayaasha ayaa sidoo kale dabagal ku sameeyay dhaqdhaqaaqeeda iyagoo adeegsanaya xogta dhulbeereedka taleefankeeda gacanta.
“Waqtigaas, waxaan siinayay maamulka iyo booliska macluumaad muhiim ah oo ku saabsan shabakadda tahriibiyayaasha, iyo la shaqeynta ay la leeyihiin siyaasiyiinta Liibiya, laakiin waxaa iska cad in intii aan soo bandhigayay macluumaadkan ay dhageysanayeen wicitaanadayda,” Burcia ayaa tiri.
Dacwad oogayaasha Trapani waxay ku andacoonayaan in feylka ay kujiraan xogta dhagaysiga suxufiga uu u gudbiyay dacwad ooge hore Trapani, ayna doonayaan inay ka codsadaan garsooraha inuu burburiyo.
Dukumiintiyada maxkamadda ee ay dib u eegis ku sameysay jariirada Guardian ayaa muujineysa in dacwad oogayaasha gobolka Ragusa ee dalka Talyaaniga ay baarayaan shaqaalihii markabka Mari Junio, oo ah markab badbaadin oo ay leedahay NGO aan lagu eedeeynin kicinta socdaalka sharci darada ah.
Dhowr weriye oo taleefannadooda si qarsoodi ah ay u duubteen baarayaasha sanadkii 2017 ayaa shaaca ka qaaday sida tahriibiyeyaasha dadka Liibiya ay u qortay Ilaalada Xeebaha Liibiya.
Roome waxay wakhtigaas siisay afar markab Liibiya, kadib heshiis iskaashi oo uu markaa saxeexay Wasiirka Arimaha Gudaha ee wakhtigaas Marco Minniti, oo uu madaxa dawlada Liibiya u aqoonsaday Qaramada Midoobay, Fayez al-Sarraj.
Tan iyo markii heshiiska la saxiixay, ilaalada xeebaha Liibiya ayaa si joogto ah u qabta doomaha muhaajiriinta ah ee ku sugan badda waxayna u galbiyeen Liibiya, halkaas oo hay’adaha gargaarka ay sheegeen in muhaajiriinta iyo qaxootiga ay la kulmaan jirdil iyo si xun loola dhaqmo.
Gargaarka Dadweynaha ee Norway ayaa doonaya in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ka falceliso qorshaha hubka Nukliyeerka ee Ingiriiska
Ruushka ayaa cambaareeyay qorshooyinka Britain, oo sidoo kale uu dhaleeceeyay Wasiirka Arimaha Dibada Jarmalka Heiko Maas.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay bilowday qorshayaal ay ku casriyeynayso hubkeeda wax gumaada ee Nukliyeerka, sidoo kale Norwegian People’s Aid waxay rabtaa fal celin ka timaada wasaarada arimaha dibada ee Norway.
Ololaha Caalamiga ah ee lagu Mamnuucayo Hubka Nukliyeerka (ICAN) ayaa sheegaya in go’aankaasi uu yahay jebinta ujeedka laga leeyahay Heshiis Aan Fidin
“Haddii Norway aysan dadweynaha u soo bandhigi karin oo ay cambaareyn karin tan, waxaan soo diri doonnaa calaamado khatar ah. Markaa waxaan sidoo kale gacan ka geysaneynaa sidii loo wiiqi lahaa Heshiiska Faafin-la’aanta iyo in hub ka dhigista iyo xakameynta hubka laga dhigo mid shaqeynaya oo aad u adag, “ayay tiri xoghayaha guud Henriette Westhrin oo ka tirsan Hay’adda Gargaarka Dadka ee Norway.
Dowladda Britain ayaa tirada madaxyada hubka nuclear-ka ee ay heysato ka badisay intii ay ahaayeen. Madaxyadaas oo markii hore ahaa 180 ayaa laga dhigay 260. Tallaabadan ayey dowladdu ku tilmaantay tii ugu weyneyd ee loo qaado dhinaca militariga tan iyo markii uu dhammaaday Dagaalkii Qaboobaa ee Dunida. Dhaqaale cusub ayaa lagu kordhin doonaa howlaha dhinaca hawada, internet-ka, abuurista robots-ka iyo diyaaradaha uusan duuliyaha saarneyn.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah isku day ay UK ku dooneyso in ay awooddeeda ku tiirsanaato qalabka Kumbuyuutarrada sida dadka loo ekeysiiyay ee loo yaqaanno “Robots”, oo la doonayo inay galaan booska askarta bani’aadanka ah. Waxaa kale oo Britain ay xoogga saareysaa in howlaheeda dhinaca cirka ay intooda badan ku fuliso diyaaradaha nooca uusan duuliyaha saarneyn ee loo yaqaanno drones-ka.
Dowladda Ingiriiska waxay sidoo kale dooneysaa inay kordhiso tirada madaxdeeda nukliyeerka oo ah 180 lagana dhigo ilaa 260. Mas’uuliyiinta Ingiriiska waxay rumeysan yihiin in hanjabaadaha socda ay ka dhigan tahay inaysan mar dambe suurtagal ahayn in lagu sii adkeysto ballanqaadyada si loo yareeyo tirada hubka nukliyeerka.
“Dawladdu ma rabin inay taageerto heshiiskii Qaramada Midoobay ee mamnuucayay hubka nukliyeerka maxaa yeelay waxay rumeysan tahay in heshiiska ku-fidinta faafin la’aanta ay tahay tan kaliya ee lagu maro adduun aan lahayn hub nukliyeer ah. Kadibna, waxay noqoneysaa masuuliyad daro dheeraad ah haddii Norway aysan hada u istaagin heshiiska la-dagaalanka, ”Westhrin ayaa sidaas yidhi.
Ingiriisku waligiis ma isticmaalin hub nukliyeer ah, laakiin waxaa jira caddayn ah in haysashadooda ay ka caawisay Boqortooyada Ingiriiska khilaafaadka iyo xilliyada nabadda. In kasta oo adduunka intiisa kale ay sii wadaan baacsigooda, waxay u muuqan laheyd caqli gal, iyo booska ugu sareeya ee Qaramada Midoobay. Jeremy Corbyn wuu ku qancin kari waayey xisbigiisa xitaa inuu ka doodo Trident, iskaba daa inuu u codeeyo, taas oo ka tagi doonta qorshayaasha militariga ee ugu sareeya Ingiriiska, iyo warshadaha difaaca Ingiriiska, oo la taahaya gargaar.
Ardayda jaamacadda Bristol ayaa taageeray macallinka la weeraray ee ‘Sahyuuniyadda Israa’iil’ darteed
Kooxaha u ololeeya Israa’iil ee isku tilmaamaya inay yihiin “Sahyuuniyada hanka leh” ayaa horseed ka ahaa olole ba’an oo ay ku doonayeen in borofisarkii cilmiga bulshada looga eryo shaqadiisii ​​Bristol.
Waa barafasoorka caanka ah ee reer Britain David Miller
Ardayda wax ka barata jaamacada Bristol ayaa si kulul uga hadlay difaaca barafasoorka caanka ah ee reer Britain David Miller kaas oo lagu weerarayo dhaliil uu u soo jeediyo dowlada Israel ee Sahyuuniyada. Ardayda kale ee jaamacadda waxay kula soo biireen difaaca macallinka caanka ah.
Waxaa sidoo kale walaac laga muujiyey qaabka loo adeegsado qeexitaanka aadka u muranka badan ee International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ee Yuhuud nacaybka loo adeegsado si loo cabudhiyo hadalka xorta ah.
Mid ka mid ah ardayda ayaa sharraxay “diinta Yuhuuddu way ka duwan tahay Sahyuuniyadda.” Qeexitaan kasta oo ay jaamacadda iyo IHRA rabaan inay qaataan waa inaysan ku xadgudbin xorriyadda hadalka, taas oo ah sida saxda ah Kenneth S. Stern, oo ka mid ah asal ahaan curiyayaasha qeexitaanka, ayaa si weyn uga soo horjeeda.
Arday kale ayaa ka yiri Taageerada David Miller Bogga in, “Aniga oo ah Yuhuudi Mareykan ah oo da ‘yar, waxaan runtii u arkaa wax laga naxo in dhaleecaynta saxda ah ee Sahyuuniyadda iyo xadgudubyada Israa’iil ee xuquuqda aadanaha Falastiiniyiinta ay ku xiran yihiin Yuhuud nacayb.
Arday Yuhuudi ah ayaa sidoo kale ka hadlay sida Sionism-ka loogu beddelay astaamo aqoonsi, sida jinsiga iyo jinsiyadda, wuxuu tilmaamay in aysan takoor ahayn in la magacaabo xasuuqa ay dowladda Israa’iil ku hayso Falastiiniyiinta. “Tani ma aha in lagu eedeeyo bulshada Yuhuuda guud ahaan. Waxa jira dad badan oo Yuhuud ah oo taageersan Falastiiniyiinta oo aan ka xumaan ereyga ‘Zionist’ maadaama aysan isku aqoonsanayn dhaqdhaqaaqa. Xorriyadda hadalka ayaa khatar ku jirta waana inay ahaataa Dhamaanteen waxaan ahaan karnaa David Miller waqti uun.
Inta badan ardayda ku jirta liiska aan magacooda la aqoon ayaa ku amaanay Miller inuu yahay “macalin khaas ah” halka ay meesha ka saareen sheegashada ah inuu neceyb yahay. “Waxaa i baray David wax badana waan ka bartay, waa macalin aan caadi aheyn, waxaanan la garab istaagi doonaa xaqiiqda ah inuusan naceyb aheyn Yuhuudda,” ayuu yiri mid. Mid kale ayaa ku amaanay Miller inuu ka dhaadhiciyey heerka musuqmaasuq ee siyaasada. “Professor David Miller… wuxuu i ogeysiiyey awoodaha musuqmaasuqa ah ee xukuma siyaasada iyo cilmi baarista ka jirta wadamada reer galbeedka iyo sida tan ay u waxyeeleyneyso kooxaha laga tirada badan yahay ee aduunka.
Cabudhinta hadalka xorriyatul qowlka ayaa ah arin muhiim u ah taageerayaasha Miller. Si xun u adeegsiga ololaha halista ah ee looga soo horjeedo cunsuriyada si meesha looga saaro borofisar waa mid lagu weerarayo xorriyadda tacliimeed iyo caddaalad darro loo geysanayo kuwa la kulmay takoor isir.
Hadalka ay tahay in la waydiiyo su’aalaha culus ee ku saabsan saamaynta kooxaha taageersan Israa’iil ee xarumaha, arday Yuhuud ah oo horey uga tirsanaa Bristol wuxuu sheegay inuu aad uga naxay sida ay Jaaliyadda Yuhuudda ee Jaamacadda Bristol ay iskuduwaha ula sameeyeen UJS ee taageerada Israa’iil. Waxaan xasuustaa dhacdo Falastiin ka dhacday oo xubno ka tirsan bulshada Yuhuuddu u sheegeen inay ‘labada dhinacba u sheegto sheekada’. Waxay si isdaba joog ah ugu sheegeen arday aan isku fasal nahay oo ka socda Daanta Galbeed in [Darbiga Kala Goynta] uu yahay ‘Deyr uun’.
Ardayda dhigata Jaamacadda Bristol iyo meelo kale waxay ku biiraan laba boqol oo aqoonyahanno ah oo ka kala socda Ingiriiska iyo Mareykanka oo saxiixay warqad furan oo ay ku difaacayaan Miller. Professor Miller wuxuu wali ku jiraa baaritaanka rasmiga ah ee jaamacada.